ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးရန် လျာထား
ပို့စ်တင်ချိန် - 12/09/2013 06:45:00 AM
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် တည်ဆောက်လျက် ရှိသည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးရန် လျာထားဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ဟံသာဝတီလေဆိပ်တည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဟာ လက်ရှိ အခြေအနေအရ မဖြစ်မနေဆောင် ရွက်ရမယ့် အရေးကြီးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နောင်အရှေ့ တောင်အာရှမှာ အချက်အချာကြတဲ့ လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး တစ်ခု မလွဲမသွေပေါ်ပေါက်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဟာ Incheon လေဆိပ်ပေါ်မှာ အခြေ ခံတည်ဆောက်ထားပြီး ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ အပြီး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လျာထားလျက် ရှိပါတယ်''ဟု ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ထွန်းအောင်က မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် ရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကြီးကို ၂ဝ၁၄ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင် တည်ဆောက်၍ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးရန် သက် ဆိုင်ရာမှ လျာထားလျက်ရှိပြီး တင်ဒါ အကောင်အထည် ဖော်ရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု အဖွဲ့အနေဖြင့် Incheon Airport Consortium လုပ်ငန်း အကောင် အထည်ဖော်ရေးနှင့် လေဆိပ် တည်ဆောက် ရေးအတွက် အခြေခံ လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာဈေး ညကလပ်များပြန်ဖွင့် ဗိုလ်ကြီးနှစ်ဦး မူးယ...
မြန်မာရေလုပ်သား ၁၁ ဦးပါ ငါးဖမ်းလှေတစ်စင်း အိန္ဒိယ ...
မြန်မာ-အင်ဒို အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲ လက်မှတ်ခများ ပြ...
စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ Facebook မှာ ဆူပူမှုနဲ့ပတ်သက်...
ကျနော့်ကို သံသယ ရှိတယ်ဆိုရင် ကျနော့်အသက်နဲ့ လောင်း...
ဒီဇင်ဘာလ(၄)ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့်...
ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဒီဇင်ဘာလ(၅)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာသတင်းဂျာနယ် အမှတ်...
ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ ထုတ် ကြေးမုံ နေ့ စဉ် သတင်းစာ
ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် အတွ...
ဒီဇင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့ ထုတ် Digital Life နည်းပညာဂျာနယ် ...
ဗိုလ်ချုပ်ဈေး မျက်နှာစာ သံပန်းများကာ၇ံထားသည့်ေ၇ှ ...
အင်တာနက် ဂျာနယ် - internet journal (12-DEC-2013)
မသင်္ကာစစ်ဆေးရာမှ ခိုးမှုဟောင်း (၃)မှုပေါ်ပေါက် (သက်ငယ်...
ရောမမြို့တွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးရေးရာ ဆွေး...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆရာ၊ ဆရာမ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝ မရ...
မိ​ကျောင်း​ကန် ​သ​ပိတ်​စ​ခန်း​ဖျက်​ဖို့ ​ရာ​ဇ​သံ​ပေး​
ယူကရိန်းမှာ သိန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ
မိကျောင်းကန် ဆန္ဒပြသူတွေ ရန်ကုန် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းမြှုပ်နှံကာ မြန်မာ-ကိုရီးယား ...
ဒီမိုကရေစီ ဘောင်ထဲက ထိုင်းနဲ့မြန်မာ
ကမ္ဘာ့အလှဆုံးအယောက်၁ဝဝ စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ခင်...
Iphone မသုံးရသေးတဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား
တရုတ်နိုင်ငံအလံ မီးရှို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ ဒေါ်နော်အုန်းလ...
( ၉. ၁၂. ၂၀၁၃ ) ရက်နေ့ လက်ရှိအချိန်အထိ နိုင်ငံအလို...
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ဒီငြိမ်းလင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရ
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲအား ဒီဇင်ဘာ ၂၉ရက်တွင် ...
အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန...
ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး (၅) နှစ်အရွယ်ပန်းချီဆရာမလေး
နိုင်ငံခြား အရက်၊ ဘီယာနှင့် ၀ိုင်များ ရောင်းချမှုရပ...
ဘောင်းဘီအကြပ် အ၀တ်များက အောက်ပိုင်းသေနိုင်
ဥပဒေကြမ်းများ ကြန့်ကြာခြင်းသည် သမ္မတတွင် ဗီတိုအာဏာမ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်များကို တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ တန်...
လက်ဖက်ရည် ကြမ်းနဲ့ ကော်ဖီ သောက်သုံးမှုက လေသင်တုန်း ...
မင်ဒဲလား ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
06B MADI မုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ၀င်မ၀င်ဆိုတာန...
ဗိုလ်တထောင် ဆိပ်ကမ်းတွင် အများပြည်သူ အပန်းဖြေနေရာ ...
အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်ဒိုနီးရှား အသင်း ဝင...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ Little India မှာ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွား
ထိုင်းလွှတ်တော် ဖျက်သိမ်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲသစ် ကျင်း...
မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်းအား ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက် ညနေ ၆ နာရ...
Non- Repetition ခြင်းလုံး ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင်...
အသားအရေ ခြောက်သွေ့ သူများ အတွက် ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်...
လိင်မှု ကိစ္စက ကုသပေးနိုင်သော အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေးကမ်းမှု အရက်ရောဆုံးစာရင်းတွင် မြန်မာ...
သမ္မတအရည်အချင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၅၉ (စ)ပါဝင်သည့် အခြေခံ...
ရေနံမြေသပိတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ အဘိုးအို စိန်ရတု အခမ်း...
လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ ပါတ်သက်၍ လူ့ဘေ...
အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း မလာရောက်နိုင်
ထုထည် ကြီးမားသော ရေချိုများကို ပင်လယ်ကြမ်းပြင် အော...
ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိ...
သစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော မူဝါဒများ သတ်မှတ်ထုတ်ြ...
ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင...
Mobile Banking စနစ်လုပ်ကိုင်ရန် သမ္မတရုံးကခွင့်ပြုေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မေတ္တာရပ်ခံစာကို တုံ့ပြန်ရန် မရ...